Carruurnimo, sharciga carruurta iyo maadinta carruurta | Samfunnskunnskap.no
Heshiiska carruurta ee qaramada midoobey wuxuu ka koobanyahey 42 qodob oo sheegaya xuquuqda carruurtu leedahay. Sharciga waxa la ansixiyay 1989, waxeyna Norwey saxeexday 1991.
Norwey waxa khusseya sharciga carruurta. Sharcigani wuxuu khuseeyaa carruurta iyo dhallinta da ‘doodu ka yartahay 18 sano, waxuuna si aad ah uga hadlayaa waajibaadka waalidiinta carruurta ka saaran iyo xuquuqaha ay carruurtu waalidka ku leeyihiin.
Halkan wax yaal qoddobo muhiim ah oo ku jira sharciga carruurta
Marka ilmo dhasho waa in dhakhtarka ama umulisadu ay war gelisaa xafiiska diiwaangelinta dadka (folkeregisteret). Waxa la gudbinayaa hooyada iyo aabaha dhaley ilamaha, iyo iney wada deganyihiin. Haddii ilmuhu uu ku dhasho meel aan isbitaal aheyn ama uu dhasho hooyada oo ku sugan dalka debediisa, waxa hooyada ku waajib ah iney iyadu soo gudbiso.
Sida sharciga ah waalidka ayaa masuulida ugu weyn ee carruurtooda iska leh, carruurtuna waxay xaq u leeyihiin xannaano iyo daryeel waalidku siiyo.
Waalidka waxa saaran waajib ah inay caruurtooda masruufaan. Taas macnaheedu waxa weeye in waalidku siiyo carruutooda cunto, dhar, iyo waxyaabaha kale ee lagama maarmaanka ah si ay nolol wanaagsan u helaan. Waajibka masruufku wuxuu waalidka saaran yahey ilaa inta ilmuhu ka gaadhayo 18 sanno. Waxa kale oo sida caadiga ah waajibka masruufka ee waalidku saaran yahay ilaa inta carruurtu ka dhammaynayaan dugsiga sare, xataa haddii ay dhaafeen 18 sanno.
Waalidka waxaa ku waajib ah iney siiyaan carruurtooda barbaarin fiican, oo ey ka fekeraan waxey carruurtu xiisaynayaan iyo waxey u baahanyihiin. Sharciga carruurtu wuxuu mamnuucayaa in carruurta in lagu xadgudbo marka la barbaarinayao. Isticmaalka xadgudb ama qalbidil waa danbi ciqbaab leh.
Waalidku waajib iyo xaqba way u leeyihiin inay carruurtooda u go’aamiyaan waxyaabo khaas ah haddii aanay carruurtu keligood go’aan qaadan karin. Sharciga carruurtu wuxuu dhigayaa in waalidku xoogga saaro waxa carruurtu ku fekereyso marka ey sii weynaadanba. Carruurtu waa iney helaan xuquuq ey go’aan iskood ugu qaadan karaan markey baaluqaan ee ey weynaadaan. Ilmaha da’diisu todoba sanno tahey, wuxuu xaq u leeyahay inuu sheego waxey isaga la tahey inta aan waalidku gaadhin go’aanka shakhsiga ah ee isaga ku saabsan. Sharcigu wuxuu sheegayaa marka ilmuhu gaadho 12 jir, in xoogga la saarayo waxey isaga la tahay.
Ilmuhu markuu gaadho 15 jir xaq ayuu u leeyahey go’aanka su’aalaha ku saabsan tacliintiisa iyo haddii uu rabo inuu galo ama ka baxo urur. Taas macnaheedu waxa weeye tusaale ahaan in ilmuhu iska leeyahay go’aanka nooca dugsiga sare ee uu rabo ama rabto in la codsado. Waalidka iyo ilmuhu wey ka wada hadli karaan taas, sidoo kale waa inuu waalidku had jeer siiyo talo ilmaha, laakiin ilmaha ayaa go’aanka iska leh. Dhalinyarada ayaa iska leh go’aanka haddii ey rabaan inay ka mid noqdaan urur siyaasadeed, mid diimeed iyo jaaliyadaha kale.
Waalidku waa inuu ku dadaalo si ilmuhu uga qeybqaato waxbarashada qasabka ah ee hoose/dhexe, waa inuu sidoo kale waalidku ku dadaalo sidii ilmuhu u heli lahaa waxbarasho ku haboon awoodooda iyo xiisahooda.
Caruurta waxey xaq u leeyihiin ineey isku heeystaan labadooda waalid, waloow eeysan labada waalidba wada nooleyn.
Da’ada qaangaadhka Norwey waa 18 sanno. Taas macnaheedu waa qofku in hadda uu da’ ku filan jiray si uu u galo heshiisyo sharci iyo in uu maamulan karo lacagtiisa. Tan hadda laga bilaabo waalidku kama masuul aha.
Maadinta carruurta (Barnevernet) ee Norwey
Taariikhda maadinta carruurta ee Norwey waxey ka bilaabantaa 1800-dii. Norwey waxey noqotay waddankii ugu horreeyey adduunka ee sameeyey maadinta carruurta ee dawladeed si loo caawiyo carruurta ku sugan nolosha adag ee u baahan caawimo dheeraad ah iyo ilaalin.
Degmo kasta waxa ay leedahay adeegga maadinta carruurta. Adeegga maadinta carruurta shaqadiisu waxa ay ku salaysan tahay sharciga maadinta carruurta. Sharcigani wuxuu khuseeyaa dhammaan carruurta iyo dhallinyarada deggan Norwey, iyadoo aan ku xidhnayn ilmaha taariikhdiisa, dalka uu u dhashay iyo muwaadinimadiisa.
Daryeelka barbaarinta carruurtu ugu horrayn waa masuuliyadda waalidka. Waalidka qaar ayaa mararka qaar u baahanaya caawimo waqti kooban ama xilli dheer, tusaale ahaan sabab xaalad-noloeed oo adag. Maadinta carruurtu waxey kaalmayn kartaa qoysaska xaaladahaas ku jira.
Ilmaha sida u roon
Maadinta carruurtu waxey bixisaa caawimo ilmaha u roon. Tani waxey u dhigantaa sida uu dhigayo heshiiska carruurta (barnekonvensjon) ee Qaramada midoobay, kaas oo ka qayb ah sharciga noorwiijanka. Heshiiska carruurtu waxa uu dhigayaa in ay carruurtu tahay shakhsiyaad gaar u taagan oo leh baahi gaar iyo xuquuq aasaasi ah oo nololeed, koboc, ilaalin iyo ka-qayb-qaadasho.
Iyadoo waafaqsan heshiiska carruurta ee Qaramada midoobay qoddobka 12, waxa la dejiyey in maadinta carruurta ay dhagaysato carruurta ra’yigooda oo ay miisaanka u liiciso kolba carruurta da’doodu inta ay tahay iyo bisaylkooda. Marka qoys xidhiidh la yeesho maadinta carruurta, markaa waa caadi in maadinta carruurtu in ay labada ba la hadasho waalidka iyo ilmaha ba.
Maadinta carruurta shaqooyinkooda ugu muhiimsan
Iney caawimo bixiyaan:
Adeegga maadinta carruurtu wuxu taageeraa carruurta iyo qoysaska marka ay carruurtu ku jirto sabab ah xaalad-nololeed oo adag ama sababo kale oo baahi u jirto. Maadinta carruurtu waxey rabtaa wada shaqaynta waalidka oo ah in carruurtu wanaag ku haystaan gurigooda. Caawimada waxa lagu bixin karaa qaab talo iyo tilmaan ama ka qaybgal firfircooni-gelinta xilliyada firaaqada, xannaanada carruurta ama SFO.
Inta badan kiisaska maadinta carruurta qoysasku waxey ku helaan caawimo guriga. Mararka qaar kuma filna in caawimo guri lagu bixiyo, waxa aanay noqon kartaa in maadinta carruurta ay isku raacaan waalidka in ilmuhu ka guuro guriga muddo kooban ama xilli dheer.
Masuuliyadda ah in la ilaaliyo:
Sida caadiga ah waxa fiican in ilmuhu uu gurigooda ku koro, laakiin adeegga maadinta carruurta waxa ay masuul ka yihiin in ay ilaaliyaan ilamaha haddii caawimo iyo taageero wada shaqayn waalid (talaabo caawimo) aanay ku filnayn in ilmaha baahidiisa la daboolo. Maadinta carruurtu waxa ay isku dayeysaa talaabooyin lagu caawiyo inta aan la qiimayn in daryeelka ilamaha lala wareego. Waa in ay jiraan sababo aad u culus oo ay maadinta carruurtu kula wareegi karaan carruurta. Tusaale waxa u ah marka carruurta lagu sameeyo daryeel la’aan weyn – taas oo ah haddii waalidku u geysto dhaawac jidh ama maskaxeed ama uu ka gaabiyo in ilamaha koritaankiisa jidh ahaan ama caafimaadkiisa maskax ahaan ay halis ku sugan yihiin. Haddii waalidku ay xadgudub ku sameeyaan ilmaha, tusaale ahaan haddii la garaaco, tan waxa loo arki karaa daryeel la’aan. Haddii ilmaha la geynayo meel aan gurigiisa ahayn iyadoon waalidka laga la tashan, arrintan waa in ay go’aamisaa Garsoorka-gobolku (Fylkesnemda) ee maadinta carruurta iyo arrimaha bulshada, taas oo ah hay’ad u eg maxkamad. Arrimahan oo kale waalidku waxey xaq u leeyhiin caawimo garsoor oo lacag la’aan ah (qareen)..
Sida uu u dhaco kiis maadinta carruurtu
Kiisas badan oo maadinta carruurta ahi waxey ku bilaabmaan in waalidka ama carruurta naf ahaantoodu ay la soo xidhiidhaan maadinta carruurta si ay caawimo u weydiistaan. Adeegga maadinta carruurtu waxa kale oo ay ka helaan war rugta caafimaadka, cusbitaalada, iskuulada, xannaanada carruurta, jaarka iyo dad kale oo u werwersan carruurta. Dhammaan shaqaalaha dawladdu, tusaale ahaan iskuulada, xannaanada carruurta iyo rugta caafimaadku waxa lagu waajibiyey sharci ahaan in ay u soo sheegaan maadinta carruurta haddii ay aad ugu werwersan yihiin ilmaha. Dhammaan wararka soo gaadha maadinta carruurta waa la qiimaynayaa. Haddii maadinta carruurtu u aragto in sababi jirto, waxa ay xidhiidh la samaynayaan ilmaha iyo waalidka si ay u helaan war dheeraad ah oo ku saabsan ilmuhu sida uu yahay. Waxa ay markaa noqon kartaa in maadinta carruurtu ay rabto in ay ilmaha keligii la hadlaan. Waalidka iyo carruurtu waxey xaq u leeyihiin turjubaan haddii ay u baahan yihiin. Waa caadi in maadinta carruurtu xidhiidh la samayso kuwo kale oo garanaya qoyska iyo ilmaha, tusaale ahaan xannaanada carruurta iyo iskuulka. Haddii maadinta carruurtu qiimayso in aanay jirin sabab werwer lihi, way laabaan kiiska. Ama waxa ay soo jeediyaan talaabo lagu caawiyo ilmaha iyo qoyska.
Sidee ayaa carruurta iyo dadka waaweyni ula xidhiidhaan maadinta carruurta?
Dhammaan degmooyinku waxey leeyihiin adeegga maadinta carruurta kaas oo furan maalintii. Carruurta iyo dadka waaweyni ba way la soo xidhiidhi karaan halkaas. Habeenka iyo sabtida iyo axaddaha carruurta iyo cidda kale ee u werwersani waxey la hadli karaan telefoonka qaylo-dhaanka ee carruurta iyo dhallinyarada 116 111.
BBarnetrygd-gu waa kaalmo dhaqaale oo la siiyo carruurta ka yar 18 jir ee deggean Norwey. Waxa lagu darsanayaa in lagu bixiyo kharashka ay keenayso in carruur la haysto. Halkan waxaad kaheli macluumaad dheeraad ah, waxaana ku qoran xaddiga lacagta ee barnetrygd: NAV Barnetrygd.
Kaalmada lacagta ah (Kontantstøtte)
Kaalmada lacagta ahi waa kaalmo dhaqaale oo la siiyo dhammaan carruurta jirta inta u dhaxaysa sannad iyo laba sanno, kuwaas oo aan tegin xannaanada. Kaalamada lacagta ah bishii ayaa la bixiyaa lana siiyaa carruurta u dhaxaysa 13 iyo 23 bilood. Haddii ay gelin tagaan xannaanada waxa la dhimaa kaalmada lacagta ah. Halkan waxaad ka helaysaa warbixin intaa ka badan, kuna jirto xaddiga lacagta ee ku saabsan lacagta kaalmada ah NAV Kontantstøtte.